Ahlu Sunna oo sheegtey inay dil & dhaawac culus u geysteen saraakiil ka tirsan Shabaab – SBC
Ahlu Sunna oo sheegtey inay dil & dhaawac culus u geysteen saraakiil ka tirsan Shabaab
Saraakiisha kooxda Ahlu Sunna Waljameeca ayaa sheegtey in weerar gaadmo ah oo loo adeegsadey qarax ay dil & dhaawacyo u geysteen saraakiil sar sare oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab ee ay sida ba’an u colaadsan yihiin.
Afhayeenka ASWJ ee gobolada dhexe C/laahi C/raxmaan Abuu Yuusuf (Al-Qaadi) ayaa sheegay in weerarkaasi oo ku tilmaamay mid gaadmo ah oo ka dhacay deegaanka Warxoolo ee gobolka Galguduud, isagoo sheegtey in ragga ku dhaawacmey weerarkaasi uu ka mid yahay wakiilkii Al-Shabaab ee gobolka Galguduud Yuusuf Shiikh Ciise (Kaba-Kudukade) isagoo sidoo kale sheegay in dil & dhaawac u geysteen saraakiil kale oo ka tirsan Al-Shabaab oo ay ka mid yihiin Ajaanib sida uu sheegay.
“Howl gal ballaaran oo Ciidamada Ahlusuna ka sameeyeen inta u dhaxeysa War-Xoolo iyo Ceel-god waxaa ugu suura gashay in meeshaas lagu naafeeyo cadawgii Khawaarijta ahaa waxaana dhimasho & dhaawac uu soo gaarey”ayuu yiri Abuu Yuusuf Al-Qaacida.
Al-Qaadi wuxuu sheegay in dhaawaca Kaba kutukade uu yahay mid aad u culus, isla markaana lagu daaweynayo Isbitaalka degmada Ceelbuur, isagoo sidoo kale sheegay in ragga dhintey uu ka mid yahay Taliye kuxigeenka Al-Shabaab ee gobolka Galguduud C/kariin Faroole & nin dacwada u qaabilsanaa & nin kale oo qaadi ahaa & waliba ilaaladoodii.
Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay xarakada Al-Shabaab oo ku aadan sheegashada ka soo yeertey Ahlu Sunna ee la xiriirta weerarkaasi dhimashada & dhaawaca sababay.